प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा के बन्लान प्रचण्ड ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा के बन्लान प्रचण्ड ?
काठमाडाै, १ फागुन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले दैनिकजसो राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याउने अभिव्यक्ति दिइरहँदा मङ्गलबार चितवन पुगेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । गृहजिल्ला चितवन पुगेर केही न केही बोलेर चर्चामा आउने गरेका प्रचण्डले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्भावित एकतामा आशंका बढाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रचण्डले कुनै न कुनै फड्को मार्ने पक्का छ । एउटा फड्कोले उनलाई देशको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष बनाउँछ भने अर्को फड्कोले देशको तेस्रो शक्तिको अध्यक्ष कायमै राखेर प्रधानमन्त्रीको पदमा पु¥याउन सक्छ । यसकारण पनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली देखिदैछन् । खाएपनि नखाएपनि बाघको मुख रातो १ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि नबनेपनि देशका वर्तमान नेताहरूभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको उचाई बनाउन सक्ने भएका छन् ।